Android မှာ EFS folder ကိုဘယ်လို restore လုပ်မလဲ Androidsis
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားခြားနားသော၊ သို့သော်တူညီသောထိရောက်သောနည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုရှင်းပြသွားပါမည် backup ကိုပြန်ထား de la EFS ဖိုင်တွဲကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖိုင်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခင်သင်ခန်းစာ၌တည်၏ငါသူတို့ကိုလုပ်ဖို့မှန်ကန်သောနည်းလမ်းရှင်းပြခဲ့သည် backup လုပ်ထား, ငါတို့ချစ်သောစက်ပစ္စည်းနှင့်အတူမကောင်းတဲ့သောက်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်သည့် backup တစ်ခု အန်းဒရွိုက်.
1 နည်းလမ်း ၁။ root file explorer နဲ့အတူ
2 နည်းလမ်း ၂ - Galaxy S Unlock ကိုအသုံးပြုခြင်း
3 Recovery Mode မှနောက်ဆုံးအဆင့်
နည်းလမ်း ၁။ root file explorer နဲ့အတူ
မသန်စွမ်း restore ကျွန်တော်တို့ရဲ့၏ backup လုပ်ထား EFS ဖိုင်တွဲကျနော်တို့အထက်ပါကော်ပီလုပ်သကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ပြုလိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းပြောင်းပြန်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားသော EFS ဖိုဒါကိုကူးယူပြီးကူးယူပါ အမြစ် Explorer ကို, ES File ကို Exploreလမ်းကြောင်းနှင့်ဆင်တူ ro / efs.
ပြီးရင် restart လုပ်ရမယ် recovery Mode ငါဒီ post ၏တတိယခေါင်းစဉ်မှာငါညွှန်ပြသောခြေလှမ်းများလုပ်ဆောင်ပါ။
နည်းလမ်း ၂ - Galaxy S Unlock ကိုအသုံးပြုခြင်း
Galaxy S လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။, အခမဲ့ရယူနိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည် Play Store ကို, ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ် ဆိပ်ကမ်းလွှတ်ပေးပါ မိသားစု Samsung Galaxy S.
အပြင်, ဒီအစီအစဉ်ကိုအတူ Samsung Galaxy S, S2 နှင့် S3 ကိုသော့ဖွင့်ပါ, EFS ဖိုင်တွဲကိုအလွန်အဆင်ပြေစွာပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။
၎င်းကိုပြန်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းကြောင်းထဲသို့သိမ်းဆည်းထားသော EFS ဖိုင်တွဲကိုသာကူးယူရန်လိုသည် Galaxy_S_သော့ဖွင့်ပါ။ sdcard မှ tab ကိုနှိပ်ပါ သော့ဖွင့် ပြီးခဲ့သည့်အရာ၏နောက်ဆုံးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ သိမ်းဆည်းထားသော efs ဖိုင်တွဲကိုပြန်လည်ထားရှိပါ.
ဒီနောက်မှငါတို့သည်ရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ် recovery Mode အောက်ပါ Wip လုပ်ပါ:
Recovery Mode မှနောက်ဆုံးအဆင့်
ဤနှင့်နှင့် terminal ၏ restart ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ရပါလိမ့်မယ် EFS ဖိုလ်ဒါကိုပြန်လည်ထည့်သွင်း ကျွန်ုပ်တို့ IMEI ကိုထပ်မံရရှိနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Samsung Galaxy S နှင့် Samsung Galaxy SII တို့ကို Galaxy S Unlock ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ, EFS Folder ကို Backup လုပ်နည်း
ဒေါင်းလုပ် - Galaxy S လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » EFS ဖိုင်တွဲအရန်ကူးခြင်းကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် EFS ဖိုင်တွဲ၏အရန်ကူးခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကို Galaxy_S_unlock ဖြင့်ပြန်ယူသောအခါ၎င်းသည်၎င်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ဟုပြောပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြမည့်လမ်းညွှန်တွင်ထည့်လိုက်သည်။
ငါငါ EFS နဲဖိုင်တွဲ၏ရှိခဲ့ကူးယူ check လုပ်ထားသည့်အခါကောင်းပြီ, ငါ့မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့သြစရာကြီးပါကအဘယ်သို့ငါပြုနိုင်သည်, emptyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ပါသလဲ
စတော့ရှယ်ယာ JVU ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ၊ ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်တင်ရန်၎င်းနှင့် Flash ကိရိယာများအားလုံးပါရှိသည်၊ သင်၏ IMEI ကိုပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် JVU စတော့ရှယ်ယာကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။ ပုံရိပ် imei ကိုပြန်လည်ထားရှိခြင်း (ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းခေါ်ခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်) သို့သော် efs ဖိုင်တွဲသည်အချည်းနှီးဖြစ်နေဆဲ၊ ကျွန်ုပ်ဘာမှနားမလည်ပါ……။
သင် efs ကိုကြည့်လားသေချာလား?
12/09/2012 08:20 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် / efs ကိုကြည့်ပါကအတွင်းပိုင်း၌ imei ဆိုသောဖိုင်တွဲတစ်ခုတည်းကိုသာတွေ့ရသည်။ သို့သော်အတွင်း၌ဘာမှမရှိပါ။ .. ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမိတ္တူကူးသည့်အချိန်ကမှားသည်။
ကိုယ့် Samsung လမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးကို samsung မှ pc သို့ကူးယူလိုက်ရင်အတွင်းပိုင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်တစ်ခုခုရှိပါသလား။
ဥပမာ - / efs ဖိုလ်ဒါရှိအကြောင်းအရာများကိုကူးယူပြီး၊ imei ကိုမိတ္တူကူး။ မပြောသောဖုန်းသို့ပြောင်းပါကကျွန်ုပ်အနေနှင့်ထပ်တူ terminal ရှိသည်။
နောက်တစ်ခါမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြား Samsung terminal တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏အရာသည်အခြားတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ဆင်းရဲသောညီအစ်ကိုထံမှဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ efs အတွင်းရှိ imei folder ထဲမှာကျွန်တော့်မှာဖိုင် ၂ ခုရှိတယ်။ တစ်ခုက bt.txt လို့ခေါ်တယ်။ အတွင်းပိုင်းက terminal ရဲ့ mac address ကိုရတယ်။
နှင့် mps_code.dat ဟုခေါ်သောအခြားဖိုင်တစ်ခုမှာ 0,00 bytes အလေးချိန်ရှိသော
ဤဖိုင်မရှိသော terminal ၏ mac address ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်ထည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်ယခင်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
efs ဖိုင်တွဲအတွင်းမှကိရိယာတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ အနည်းဆုံးဖိုင် ၁၀ ခု၊ imei ဖိုင်တွဲနှင့်အခြားဖိုင်များရှိရမည်
12/09/2012 14:35 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ကောင်းသောမိုnight်းလင်း ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သင်ဆဲလ်ဖုန်းများအတွက်အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် samsun clone s6 (sm-g920f) ရှိသည်။ ၎င်းတွင် emai မရှိပါ၊ ၎င်းသည်အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုပြင်လိုက်သည်နှင့်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။ ငါ့အီးမေးလ်က pavalos35@gmail.com
ကိုကိုး CFS ဟုသူကပြောသည်
သင့်တွင်အခြား s4 ရှိပါက rom အားလုံးကို samsung အကွက်ဖြင့်လွန်ခဲ့သောဆဲလ်ဖုန်းမှ ပြန်လည်၍ ပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ကျန် s4 မှသင်ရရှိထားသော efs ဖိုင်တွဲကိုပြန်လည်ရယူရန်။ ANDROMIZER PRO ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုသော efs ဖိုင်တွဲကိုအရန်ပြုလုပ်ရန်။ ၎င်းတွင် imei backup လုပ်ထားသည့် option ရှိသည်။ ပြီးရင်ကွန်ပျူတာကိုကူးထည့်ပါ။ EFS ဖိုလ်ဒါတွင်ပါဝင်သောအရာများကိုကြည့်လို့မရသောဘရောင်ဇာအချို့ရှိပါသည်။ နောက်တစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။
Coco Cfs ကိုအကြောင်းပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ / efs ဖိုင်တွဲကိုကြည့်တယ်။ imei folder ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး၊ / efs ဖိုင်တွဲထဲမှာအခု data တချို့ထွက်လာတယ်။
အရာရာကို format လုပ်ပြီး odin ဖြင့်စတော့အိတ်ချိန်းကိုထည့်ပါ
12/09/2012 16:49 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ဟင် Francisco၊ ငါဗင်နီဇွဲလားက Carlos ပါ။ သင့်မှာ efs folder မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး၊ သို့သို့သိုမဟုတ် odin ဖြင့်သိုလှောင်ခန်းကို format လုပ်ပြီးတပ်ဆင်ရမည်ဟုသင်ပြောလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း (S3) မစတင်သောကြောင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ နှင့် odin mode တွင် efs အကြောင်းတစ်ခုခုပြောထားသည်။
ကျွန်ုပ်သည်မူရင်း 4.1.2 ကို odin ဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးပါပြီ၊ သို့သော်၎င်းသည် စတင်၍ မရပါ၊ မူလမြင်ကွင်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေပါသေးသည်
ODIN မှအမှားများကိုကျွန်ုပ်ဆက်ပြောသည်။ efs နှင့် cant`mount efs ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ
carlos beato venezuela သို့ပြန်သွားပါ
ကားလို့စ်၊ မင်းမင်းတင်လိုက်တာကိုဖတ်တယ်။ သူမစတင်သောအခါ recovery mode တွင်သင် EFS အချို့ရရှိသောအခါ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ငါ့ကိစ္စအတွက်ငါလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ Rom အားလုံးကိုအခြား S4 ကနေဖယ်ထုတ်ပြီးအဲဒါကို Samsung ရဲ့သေတ္တာထဲကိုငါဆဲလ်ဖုန်းထဲကူးထည့်လိုက်တယ်။ ဤနည်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုမျှမပါရှိပါ။ imeiop ကို reset လုပ်ဖို့ရေဘဝဲကိုသုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာအားလုံးဟာသပေမယ့်သင်တတ်နိုင်လျှင်အဆုံး၌တည်၏။
ပထမ ဦး စွာ ODIN ဖြင့် flash လုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကအခြားသူများနှင့်ကြိုးစားပါ။
coco ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းအဖြေနဲ့အတူဘယ်လို odin နဲ့အတူ flash လုပ်မှာလဲ ????
Flashing လုပ်ခြင်းသည်အခြားအခန်းတစ်ခန်း (တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာလုပ်ခဲ့ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်ဗားရှင်း ၄.၁.၂ ကို odin ဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးထည့်ပြီး ၄.၂.၂ ဖြစ်သောတရားဝင်စစ်ဆေးမှုဖြစ်သည့်အခန်းကိုတင်လိုက်သည်။
သင်ကူညီနိုင်သည့်အရာများတွင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ငွေများစွာပေးနေကြသည်။ $ 100 အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်
သင်မူရင်းမိတ္တူကိုမသိမ်းဆည်းပါကဘာမှ လုပ်၍ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်လုပ်ဘာမှမရှိဘူးဟုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် blog post ပို့ပေးပါ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်တွင်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် efs ဖိုင်တွဲမရှိပါ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
07/02/2013 09:13 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Gustavo Henriquez ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းငါမှတ်စု ၂ နှင့်အကူအညီလိုသည်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! ငါ efs folder ကို backup လုပ်မထားဘူး၊ ငါ install လုပ်ထားတဲ့ rom အသစ်ကငါ့ကိုယေဘူယျ imei 2xxxxx ပေးသည်။ သင်ဤပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိပါသလော။
Gustavo Henriquez အားပြန်ပြောပါ
Jordi သောမတ်စ် ဟုသူကပြောသည်
jordi tomas သို့ပြန်သွားပါ
Ariadna Betancor Ojeda ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာ Samsung Galaxy galixy mini ရှိတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာငါထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်လဲ tutorial ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ efs folder ရဲ့ကော်ပီကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ အခုဖုန်းမှာအချက်ပြလိုက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ imei ငါဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲသိချင်ပါတယ်
Ariadna Betancor Ojeda အားပြန်ပြောပါ
sammobile.com သို့ ဦး စွာ Odin မှ flash ကူးယူရန်မူရင်း firmware ကိုသင်မှတ်ပုံတင်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ IMEI ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်သည်ကံကောင်းလိမ့်မည်။
နို ၀ င်ဘာ ၈ ရက်၊
Nahir rodriguez ဟုသူကပြောသည်
hello francisco i android ကိုအသုံးပြုပြီးအသစ်၊ ကျွန်ုပ်တွင် s4 ရှိသည်။ အချက်ပြခြင်းမရှိဘဲယနေ့ထိကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ movistar ချစ်ပ်ကိုအခြားဆဲလ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ပြီးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့် ၄ င်းသည်ကွန်ယက်ပြwasနာများဖြစ်ကြောင်း၊ ဤဖိုရမ်များတွင်ကျွန်ုပ်၏ screen imei ကိုဘက်ထရီနောက်ကွယ်တွင်ထင်ဟပ်စေသည့်အရာနှင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်ရခဲ့သည်။ သူတို့သည်မကိုက်ညီပါသလော။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
Nahir Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ သတိပြုရန်အချက်ပြဘားတွင် galaxy s2 ရှိတယ်ကျွန်တော်မက္ကဆီကိုရှိတယ်လီစတော့ရှယ်ယာနဲ့စခဲ့တာကတားမြစ်ထားတဲ့စက်ဝိုင်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်အမြစ်တွယ်ခဲ့တယ်။ EFS ရဲ့ backup တခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပြုပြင်ရေးအက်ပ်ကိုငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ ထောက်ခံချက်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တစ်ပတ်ပြတ်ပါတယ်
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံရှိ sim သို့မဟုတ်ချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်၏ sansung galaxy SGH-T679 ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လွှတ်မည်နည်း
ဟိုဆေး Armando Hidalgo Montes ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်နဂါးငွေ့တန်းမှတ်စု2အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
Jose Armando Hidalgo Montes သို့ပြန်သွားပါ
03/04/2013 06:29 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီခွင့်ပေးပါ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်၏ sgs တွင် JB ညစဉ်ညတိုင်း cyanogenmod rom ထည့်ထားကြောင်းပြောပါ။ ငါ wipes ၏ခြေလှမ်းများအားလုံးပြီးပြီ။ terminal ကိုစဖွင့်တဲ့အခါ pin နံပါတ်ကိုတောင်းတယ်၊ ငါထည့်လိုက်တဲ့အခါ sim number တစ်ခုထည့်ရန်ပြောသည့်မီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင်ရလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမသိတာကြောင့်ငါအဲဒီခြေလှမ်းကိုကျော်သွားပြီ။ ငါဖုန်းကိုပြုပြင်ပြီးနောက်တဖန်ငါကွန်ယက်မပါဘဲဖြစ်၏။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမပြုမီ, ငါသည်ငါ့ imei နံပါတ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါယေဘုယျတစျခုရှိ။ , ခြေလှမ်းများပြီးနောက်ငါနောက်တဖန်ကြည့်ရှုပြီးယခုငါကွဲပြားခြားနားသောတ ဦး တည်း (ငါထင်ငါ့ဥစ္စာ) ကိုရ။ ငါအဲဒါကို fix ဖို့ဘာလုပ်သင့်သလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် efs ဖိုင်တွဲကိုရှာမရလျှင်ကော ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
မင်္ဂလာပါ၊ ဗားရှင်း ၂.၃.၃ တွင်ဤပရိုဂရမ်နှင့်ပါရှိသည့် efs ဖိုင်တွဲကိုမိတ္တူတစ်ခုပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း ၄.၁.၂ သို့အဆင့်မြှင့်ပါကထိုအရံသိမ်းကိုပြန်ယူနိုင်ပါမည်လား။
သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်း၊ ငါ s3 i9305 ကို root လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခုသူက signal မရဘူး။ imei code က null လို့ပြောတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
Ramses Flores သို့ပြန်သွားပါ
Leon Aramayo ဟုသူကပြောသည်
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် Stock rom ကိုတပ်ဆင်ပြီးအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသာပြောပြီးကျွန်ုပ်၏ imei နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိကိုက်ညီမှုရှိပါကကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များအားလုံးနှင့် * * 06 # ကိုခေါ်ပါက efs ဖိုလ်ဒါကိုပြုပြင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်မည်နည်း။ ဒီပြproblemနာအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကဘယ်တစ်ခုလဲ။
Leon Aramayo အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် unhtc one x ရှိပြီး၊ developer manual မှ jelly bena 4.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အထိ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တရား၏အမှတ်အသားကိုမတွေ့ပါ။
ငါဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ သူတို့က efs တွေကိုပြန်ယူဖို့ပြောတယ်၊ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး၊ တယ်လီမှာပြင်ဆင်ချက်ရှိမရှိသိချင်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ galaxy s2 ကိုပြန်ထားသောအခါအဘယ်ရလဒ်ရသနည်း။ ဓာတ်ပုံများ၊ စာများ၊ အီးမေးလ်များကိုဖျက်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေးခွန်းတစ်ခုက efs folder ကိုပြန်ယူပြီးကျွန်ုပ်၏ ime ပေါ်လာပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်စတစ်ကာရှိနောက်ဆုံးနံပါတ်မှာ ၁၂၀၃၉ ဖြစ်သည်
ဒါပေမယ့်ငါ imei ထားလိုက်ပြီး imei ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းက 12039/01 က
ဟယ်လို။ နည်းလမ်း ၁ မှာ paste ထားတဲ့အခါဖိုင်တွေကိုကော်ပီကူးတယ်။ ပြီးရင်ပြီးပြီ။ မိတ္တူကူးယူမှုမအောင်မြင်ပါ ပစ်မှတ်ဖိုင်စနစ်ပေါ်တွင်နေရာအလုံအလောက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဒီနေ့ငါ RC4 cyanogenmod rom ကိုတပ်ဆင်ပြီးပြီ။ အရာရာတိုင်းကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ငါစဖွင့်တုန်းကငါ့ IMEI ကမမှန်ကန်ဘူး၊ ပြproblemsနာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ငါ၌ဆူနာမီမတိုင်မီကကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် IMBI မရှိကြောင်းသံသယဖြစ် မိ၍ ဖြစ်သောကြောင့် JB နှင့်သာလျှင်ဤပျက်ကွက်မှုကိုစတင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်အက်ဖ်ဖိုင်တွဲနှစ်ခုကိုအခြားနေရာတွင်သိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်အမြစ်တွင်မဟုတ်ဘဲ backup ကိုထည့်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ efs-581 ဟုခေါ်သောကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုမသိသောကြောင့်၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုကိုပြန်လည်ရယူသောအခါ IMEI အမှားဆက်ရှိနေသည်။ သို့သော်၊ galaxy unlock folder တွင်အခြား efs ကော်ပီတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးဒုတိယလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ပြန်လည်ရသောအခါ Roberto (လွန်ခဲ့သော ၄ လကပေးပို့ခဲ့သောစာ) နှင့်အမှားတူပြီးကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ကွန်ယက်တစ်ခုရှိတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် root explorer ဖြင့်ဖိုင်တွဲကိုကူးယူပြီး၎င်းသည်2megabytes သာရှိပြီးဖိုင် ၁၉ ခုနှင့် folders ၆ ခုသာအလေးချိန်ရှိပါသလား။ .img format ဖြင့် efspro နှင့်လုပ်သောအခြားမိတ္တူတစ်ခုသည် 19 megabytes ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Miguel Nunez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Miguel Núñezပါ။ ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်သောခြေလှမ်းလှမ်းသင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ကြိုးစားသမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ IMEI ကိုပြန်လည်ရယူပြီးကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်အတွက်အားလုံးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာခင်ဗျားရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ထံမှအလွန်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်။ မင်းရဲ့အကူအညီ၊ မင်းကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါနင့်ကိုအဆင်ပြေအောင်ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါ SAI ရဲ့ PC မှာ backup မိတ္တူကူးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ကံကောင်းတာကငါလုပ်ခဲ့ပြီးတာနဲ့ငါလုပ်ခဲ့တာက IMEI UNKNOWN ပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ device မှ status, အရာဝတ္ထုမှာ folder ကိုငါ copy လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာ device ကို "ခွင့်ပြုချက်ငြင်းပယ်ထားတယ်" ဆိုတော့ slimbean android 4.3 rom ကို install လုပ်လိုက်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် efs ဖိုလ်ဒါကိုဖျက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း samsung galaxy ypro သည်အခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သော sim ကိုမဖတ်လိုပါ။ efs ဖိုင်တွဲကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုအရန်ကူး ထား၍ မရ။
ပြီးတော့ root explorer ရဲ့အဆိုအရ efs မရှိဘူး။ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာ၌လေ့လာသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ SAI ဖိုင်တွဲကိုအရန်မသိမ်းပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၌မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်ပါသေးသလား။
Diego Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ငါ efs folder ကိုမိတ္တူလုပ်။ ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထား။ ဒီကိစ္စမှာငါဘယ်လိုပြန်ထားရမလဲ။ ငါကမိုဘိုင်း၏မှတ်ဉာဏ်သို့ကူးယူရန်ရှိသည်?
သူငယ်ချင်းငါကူညီမယ် ကျွန်ုပ်၏အတွင်းမှတ်ဉာဏ်ကိုကျွန်ုပ်၏တက်ဘလက်မှအသိအမှတ်မပြုပါ။ root ဖိုလ်ဒါများကိုကျွန်ုပ်ပယ်ဖျက်မိလားမသိပါ။ c
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပုံကတော်တော်ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အောက်ပါမေးခွန်းတွေပေါ်လာတယ်။
၁) efs ဖိုင်တွဲကိုမူလနေရာတွင်ကူးထည့်ပါက efs ဖိုင်တွဲရှိပြီးသားဟုပြောသောအချို့ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်လျှင်တည်ရှိပြီးသောဖိုင်တွဲကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
၂ ၎င်းသည်ကဒ်၏ efs များ၏မိတ္တူကိုကူးယူရန်ပြောသောဒုတိယနည်းလမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာတွင်ကူးယူသည်၊ နှင့်သော့ဖွင့်ခြင်းကိုနှိပ်ပါ။
Hello Francisco .. ကောင်းသောည။ ကျွန်ုပ်၏ Samsung i9003 နှင့်ပြသနာများရှိသည်။ imei ကိုတစ်ညလုံးဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ၎င်းကိုနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှု ၂ ခုသို့ယူဆောင်လာပြီးသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ အဖြေတစ်ခု? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Galaxy S2 (9100)
(အမှု၌သင်မေးလျှင်) ငါ Kies ကို install လုပ်ပြီ, ငါကအမြစ်တွယ်ပြီးပြီ, Flash ကိုကြိုးစားနှင့်အခြားအရာ ..
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်အရာဝတ္ထုများစွာနှင့်ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၌ IMEI ၌အကျင့်ပျက်ခြစားမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဘက်ထရီနောက်ဖက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာဝတ္ထုနှင့်မတူပါ။ လွယ်ကူသောလှည့်ကွက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသော်လည်းမည်သည့်အရာမျှမပါ။ ။
ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာရရှိသည်။ အချို့က Kernal အတွက်သာဖြစ်သည်ဟုငါပြောခဲ့သည်၊
ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရူးအမူးကြိုးပမ်းမှုအားလုံးတွင်တစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောကွန်ယက်ကိုထားရှိပြီးကျွန်ုပ်၏အသက်တာ၏ဖြစ်ပျက်မှုအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ သို့သော်ကွန်ပြူတာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်၊ သူသည်နောက်တဖန်မဆက်သွယ်ပါ။ ယခုချက်ချင်း ဆက်သွယ်၍ မရပါ။
ငါ FORMAT ချင်တယ်, ငါ့ samsung S2 မှအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်နှင့်ကပြန်လည်ထည့်သွင်းချင်ပေမယ့်မူရင်း Operating System ။
ဒီနည်းနဲ့ IMEI ကိုလက်ခံနိုင်မလား။
(အကယ်၍ သင်၏အဖြေကဟုတ်ကဲ့လျှင်) မူရင်းနှင့်တရားဝင်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့်မည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်ခန်းစာများပေးပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားမှာဒီ Android Android ကိုကျွန်တော်နားလည်တာပါ၊ အကယ်၍ Room ဆိုရင်၊ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်၊ အခန်းသိုလှောင်ထားမယ်ဆိုရင်အသုံးအနှုန်းတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။
မင်းရဲ့အကူအညီကိုငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်၊ ငါပိုက်ဆံသိပ်မများတဲ့အတွက်ငါ့ရဲ့အော်ပရေတာကိုပြောင်းလဲချင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်ဒီတစ်ပတ်လောက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်။
OOOOJOOOO ကျွန်ုပ်ဝယ်ခဲ့သောဆဲလ်ဖုန်း« efes »ဖိုင်မိတ္တူမရှိပါ။ ငါ imei ပြောင်းလဲသွားသည်
မင်္ဂလာပါ။ rom rom အတွက်ကူညီနိုင်လျှင် sansung sgh-i997 infuse 4g ရေဒီယိုကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါသည်။ -10.1-20130215-UNOFFICIAL-infuse4g
အိုင်ဗန် rendon ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနံနက်ခင်းမှာ၊ ကျွန်ုပ်၏ tablet သည် samsung ပုံတွင်အေးခဲသွားပြီး efs ဆီမှအမှားတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နေရာတိုင်းတွင်ရှာ။ မတွေ့ပါ။ ငါ s3 ၏ efs ကိုရှာပြီးငါ boot လုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်မှားယွင်းမှုများစွာကိုမှတ်သားသည်။ ၎င်းသည်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းနှင့် samsung note 8 gt-n5110 ၏ efs များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း။
ivan rendon အားပြန်ကြားပါ
လူးဝစ် Ortiz ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးနံနက်ခင်းပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Samsung S4 သည်ဘလူးတုသ်အားမဖွင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အားမသွင်းပါ၊ ဘလူးတုသ်ကိုဖွင့်ခြင်းသာလျှင်ဘာမှမလုပ်ပါ။
Luis Ortiz ကိုပြန်သွားပါ
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ်တွင် samsung s4 ရှိပြီး rom ကို Lolipop သို့ပြောင်းလိုက်သည်။ ယခုတွင်အချက်ပြအချက်အလက်များမရရှိပါ။ ချစ်ပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းမေးခွန်း၊ ကျွန်ုပ်၌ imei မှထုတ်ပြန်သောကုဒ်ကိုတောင်းဆိုသောမိုဘိုင်း yoigo ရှိသည်။ ၎င်းသည်တစ်လလုံးလုံးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်မူ၎င်းသည် (ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသောကုဒ်နံပါတ်) ဖြစ်သော sim sim release code ကိုတောင်းလာသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကုဒ်မှားကြောင်းပြောပြသည်။ ငါကတော်တော်များများသောနေရာများသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီသူတို့ကဖြန့်ချိနိုင်ကြသည်မဟုတ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲ။
ကျွန်ုပ်မှာ EFS ဖိုလ်ဒါမရှိဘူး၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။
zum လိုပဲ ဟုသူကပြောသည်
samsung galaxy s4 i9500 ၏အခန်းသိုလှောင်ခန်းအားမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောပြနိုင်ပါသလား။ ငါကအခြားသူများအကြား၎င်းကို sammobile မှကူးယူရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းကိုဖွင့်တော့သောအခါ zip ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလိုအပ်သည်၊ ၎င်းဖိုင်သည်ဗလာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ ငါ lollipop 501 သို့မွမ်းမံပြီးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အချက်ပြတစ်ခုလုံးကိုချထားပြီးသည်နှင့်ဗလာဖြစ်သော efs ဖိုင်တွဲကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာကို root လုပ်သင့်သည်ဟုပြောသောကြောင့် donwgrade လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြtheနာကဘာဖြစ်လို့အလုပ်မလုပ်တာလဲဖျက်ချင်တာ။ အဲဒီမှာငါဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ အခုအချိန်မှာတစ်ယောက်ယောက်ရှိရင်အဲဒါကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် venezuela movistar မှ samsung galaxy s1 I4 ဖြစ်သည်။
gust zum အားပြန်ပြောပါ
Advanced / wipe dalvik cache သည် s5 recovery တွင်မပေါ်ပါ။ ငါဘယ်မှာလုပ်မှာလဲ။ အားလုံးကောင်းတယ်
၎င်းကို Root လုပ်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုထည့်သွင်းပါ။
Luis jorge ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်စောစောဖရန်စစ္စကိုကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလားမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၌ lg optimus 4x P880 ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရင်၏အမြစ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ခဏကြာသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အချက်ပြမှုနှင့်အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးသွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ES FILE EXPLORER ကို ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ EFS ဖိုင်တွဲမရှိပါ။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲသူငယ်ချင်း၊ မင်းရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
jorge luis အားပြန်ပြောပါ
Hello Francisco ruiz မင်းကောင်းကောင်းမှတ်ချက်ပေးတာကိုငါကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်သူကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ imei မှတ်စု3neo မှပြောင်းလဲသွားကိုငါသိ၏။ ပုံရဲ့နောက်ကျောကကော်နဲ့မတူဘူး။ ငါ့ imei d3 ကော်ကိုရဖို့ပြောပါ။
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းသူငယ်ချင်းဖရန်စစ္စကို၊ ကောင်းမွန်တဲ့အလှူငွေ၊ ငါဗင်နီဇွဲလားကပါ။ ပြီးတော့ LG Optimus 4x P880 ရှိတယ်၊ ဘုရင်ရဲ့အမြစ်ကိုတပ်ဆင်လိုက်တယ်၊ ခဏတော့ကောင်းကောင်းရတယ်။ ဒါပေမယ့်အချက်ပြမှုနဲ့အချက်အလက်ပျောက်သွားတယ်၊ ငါ ES FILE EXPLORER ကိုဆက်ပြီး install လုပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် SAI ဖိုင်တွဲမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါ IMEI ဆုံးရှုံးသွားပြီး * # 06 # ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ "ခဏစောင့်ပါ။ " ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသူငယ်ချင်း။ ဖုန်းမှာဖုန်းအသစ်တွေမရှိတော့ဘူး၊ စျေးသိပ်မများသေးဘူး၊ ဒီမှာအခြေအနေကသိပ်မကောင်းဘူး။ , ငါတကယ်အကူအညီနဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း Francisco က
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ s3 mini သည် "efs" ဖိုလ်ဒါတွင်အမှားတစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းကိုမဖွင့်သောကြောင့်မပြုပြင်နိုင်ပါ
Samsung Galaxy S, Rom RemICS-JB V2.0 သည်ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသည်